Akhriso:- Odaygii ugu Nasiibka Badnaa iyo wax uu ku helay Nasiibka | Entertainment and News Site
Home » bulshada » News » qiso » Akhriso:- Odaygii ugu Nasiibka Badnaa iyo wax uu ku helay Nasiibka
Akhriso:- Odaygii ugu Nasiibka Badnaa iyo wax uu ku helay Nasiibka
daajis.com:-Sawirka aad aragtaan waa nin oday faqiir ah oo ku nool dalka #Ghana(Gaana), waxaana lagu magacaaba Xasan Cabdullahi.
Tv-ga caanka ah ee #TRT (Turkish Radio & Television) ayaa barnaamij filim ah ka diyaarinaayay tuulo ku taalo dalka Ghana oo ay muslimiintu ku badanyihiin, balse waxaa ka dhacday kaamirada duusha ee loo yaqaano (drone), mid ka mid ah sawir qaadayaashi ayaa baadi-goob u galay Drone-kii, waxa uu ugu tagay kaamiradii oo nin oday ah gacanta ku haayo oo la yaaban waxaan yar oo duulaayo! odaygii ayaa su’aal weydiiyay sawir qaadihii Turkiga ahaa:
“Diyaaradaan yar xajka ma ku tagi karaa?””!!!!
Odaygii ugu Nasiibka Badnaa
Sawir qaadihii Turkiga waxa uu ku baahiyay barta #Twitter, nasiib wanaag saacad kadib waxaa ka soo jawaabtay wasaarada arimaha dibada ee dowlada #Turkiga oo la xiriirtay safaaradeeda dalka Ghana oo si dag dag ugu dirtay xajka ninka odayga faqiirka ahaa ee lagu magacaabo Xasan Cabdullahi.
Maantase waxa uu joogaa Dalka sacuudiga waxa uu gudanaaya acmaashii xajka.
ogoow waxa aad si daacad ah ugu hamiso in Alle ku fududeenaayo oo adoomadiisa ku soo adeejinaayo.
•Alle haka aqbalo acmaashiisa walaalka muslim ka ah ee Xasan Cabdillahi.
• Alle haka ajarsiiyo dowlada Turkiga iyo dadkii ka shaqeeyay.
• anagana Alle SWT Hana siiyo nasiibkaasi oo kale.
kuwaana Akhriso Caadi Ma Ahan: bulshada, News, qiso